Aoka ho mpanam-pahefana maoderina manam-pahefana | RHCE Certification
Ahoana ary ny antony ahafahanao mahazo ny mari-pahaizana matihanina manana mari-pahaizana mari-pana
Ahoana ny fomba hahazoana ny mari-panaovana fanamarinana ny Red Hat Certified Engineer?
Inona ny fandaharam-pampianarana RHCSA?
Ity ny fandaharam-pampianarana momba ny fanadinana RHCSA:
Fa maninona no mahazo mari-pahaizana certificat de certificat de Red hat?
Ny kalitaon'ny Red Hat Certified Engineer (RHCE) dia azo antoka ho an'ny manampahefan'ny Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) izay manana ny fahaiza-manaony, ny fahatsiarovan-tena ary ny fahaiza-manao takiana amin'ny mpandrindra ny rafitra ambony kokoa miandraikitra ny rafitra Red Hat Enterprise Linux® (RHEL) . Afaka mivadika ho RHCE ianao raha manomana ny RHSCA ary hahazo ny mari-pahaizana.
Ny mari-pankasitrahana RHCSA dia anisan'ireo voamarina tsara indrindra avy amin'ny Red Hat amass. Amin'ny ankapobeny, ny Red Hat dia manolotra fanamarinana ho fanamafisana rehefa vita ny fandaharanasa fanomanana. Io fiomanana io dia nomanina ho an'ny manam-pahaizana manokana IT amin'ny sehatra maro samihafa izay miasa amin'ny fanatontosana asa maimaim-poana eo amin'ny Linux, anisan'izany ny fametrahana, mampifandray ny tambajotra, mikarakara fikarakarana ara-batana, ary ny fitantanana fiarovana fototra.
Raha toa ka miezaka ny hampitsahatra ny RHCE mazava ianao, tokony hiditra ao amin'ny Red Hat Website ianao ary hitady mpiara-miasa miomana ao amin'ny faritra misy anao. Azonao atao ny mifandray amin'ireo manam-pahaizana manokana ary mikatsaka ny RHCSA. Ho fanesorana ny fanadinana matihanina Red Hat Certified Engineer, dia mila mandray ny tsirairay amin'ireo lohahevitry ny fandaharan'asa fanomanana, ary koa ny lafiny hafa, ohatra, ny drafitry ny fandaharan'asan'ny tambajotra. Ireo lohahevitra dia azo jerena ao amin'ny fitaovana fanomanana sy ny fitaovam-pitaovana omen'ny ekipa mpiara-miasa. Azonao atao ny maneho ny fanamafisana fanamafisana ao amin'ny Red Hat amin'ny fandaharam-potoana tianao. Ny fotoam-pitsapana dia mifantoka amin'ny rafitra azo antoka amin'ny fifantohana amin'ny fitsapam-pahaizana mahomby. Azonao atao ihany koa ny misambotra amin'ny safidin'ny Red Hat samihafa ary manomana ny fotoam-pahaizana amin'ny fanadinana.
Ny fanadinan'ny RHCSA exam exam dia manome ny fototra ho an'ireo fanantenana izay manandrana ny hampitsahatra ireo mpandrindra ny Linux amin'ny alàlan'ny fampisehoana ny tsinontsinan'ny tsinjara ilaina sy ny fitaovam-pitsaboana fanampiny. Ireo fepetra ireo dia mbola apetraka amin'ny tetikasa manaraka, ny Red Hat System Administration II.
Fampidirana hamaritana ny teoria andalana
Mankanesa any amin'ny rafitra fanalahidy Linux
Fitaovana fianarana sy fametrahana ny serivisy sy ny fitaovana rindrambaiko
Fametrahana sy fametrahana rafitra virtualized
Fametrahana fidirana firewall sy fifandraisana an-tambazotra
Mitantana ny fitehirizana ara-batana
Manoritra sy manara-maso ireo dingana
Famerenana ny rakitra ao amin'ny rafitra
Fiarovana sy fanaraha-maso ny rakitra
Mitantana vondrona sy mpampiasa
Ny fanamafisana ny RHCSA dia fototra amin'ny fiverenana ho RHCE. Ny làlana fanamafisana ny Red Hat dia mifantoka amin'ny manam-pahaizana manokana, ny mpitantana ny rafitra, ny mpitantana ny fampiharana, ny mpikaroka, ary ny mpandraharaha mpandraharaha, na eo aza ny virtoaly sy ny mpandrindra rahona, izay manatanteraka ny RHEL ao amin'ny fototra iorenany. Ny fiantohana dia miantoka fa ny mpifaninana dia lasa mahomby tsara amin'ny RHEL amin'ny alalan'ny fitakiana fanadinana am-panafahana amin'ny famonoana. Raha heverin'ny fanadinana ny fanadinam-panjakana nahazo fankatoavana an'i Red Hat, dia omeko ny fankasitrahana ny Red Hat manam-pahefana. Manome anao fahafahana hanatratra ny vondrona Red Hat amin'ny olona izany, hifandray amin'ny mpiara-belona mety, ny fanadihadiana ny fihaonana ary ny fiaraha-miasa.
Raha toa ny fanadihadiana sasantsasany amin'ny fanadihadiana sasany dia mangataka fanamafisana fohy na maromaro samihafa momba ny fanavaozana manokana, mila anao hitantana sy hanatontosana ny andraikitra tena marina i Red Hat amin'ny fampiasana ny fahaizan'i Red Hat mitadidy ny tanjona farany hamaranana ny fanadinana azy. Na dia eo aza ny tsy fisian'ny fepetra ankatoavina ho an'ity dingana ity, ny fahalalàna mifandraika amin'ny fitantanana ny raharaham-barotra dia ho tena sarobidy.
ASP.NET amin'ny OpenShift: Manomboka amin'ny ASP.NET